Gawsoorka | January 2020
Diyaarinta karootada xilliga qaboobaha, sida loo kaydiyo: dhaqday ama wasakh ah?
Editor Ee Doorashada January 24,2020
Ugu Weyn Ee Gawsoorka
Horumarinta tayo yaraanta beeraha guriga ma aha mid caan ah sida kaabajka cad ee caadiga ah sii kordhaya. Sababta xaaladdan xaddiga ah waa la'aanta aqoonta beeralayda ku saabsan suurtagalnimada in ay ku koraan kaabajka noocaas ah xaaladaha leh jawiga qaboobaha, iyo rabitaan la'aanta in nacas la warshad aan la garanayn.
Waxaan ku beernaa geed aan tayo lahayn geedo
Kobcinta khudradda sida tuunoriga ma fududa in xaaladaha cimilada. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha sifooyinka daryeesha iyo ilaalinta dhammaan farsamooyinka lagama maarmaanka ah ee beerto iyo koritaanka, waxaad naftaada iyo kuwa aad jeceshahay kula faraxsan tahay kaabashka ugu quruxda badan, dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh. Noocyada ugu wanaagsan ee tufaaxa Tani waa fitamiinada fitamiinada C, A, B, E, D, K, H, U iyo qaybaha sida amino acids, carbohydrates, starch, fiber, pectins, acids organic, sonkorta dabiiciga ah, borotiinka, asiidhka polyunsaturated, biotin, xayawaanka nadiifka ah.
Kala ogaato noocyada ugu muhiimsan ee kaabash
Kaabashka ayaa muddo dheer loo yaqaanay bini-aadmiga waxaana ka mid ah cuntooyinka ugu badan ee la cuno. Dabeecadda, waxaa jira in ka badan konton nooc oo khudraddaas ah. Iyada oo noocyada ugu caansan ee kaabajka, sawiradooda iyo magacyadooda ayaa lagu soo bandhigi doonaa maqaalkan. Belokochanna Dhaqanka ugu caansan iyo caansan ee dalalkeena.
Toongeli faa'iido leh oo waxyeello leh
Aan tayo lahayn waa khudradda jilicsan. Magaciisu maaha mid ka yimid xaqiiqda ah in uu yahay midab, laakiin waxay ka kooban tahay inflorescences. Waxaa sidoo kale la yiraahdaa "curly", sababtoo ah nooca noocan ah ee kaabajka ah runtii waa mid qarsoodi ah. Ku saabsan faa'iidooyinka tayo badan ee jidhka muddo dheer kama doodi karo, sidaas awgeed maanta waxa uu ku jiraa meel wanaagsan oo sharaf leh oo sharaf leh maalin kasta.
Sida loo diyaariyo caaryar ah jiilaalka
Khudradda ugu caansan ee beerta noo ah waa tufaaxa. Blossoms waxay qurxin doontaa wax kasta oo saxar ah, gaar ahaan marka la barbardhigayo broccoli. Oo iyana ma aha mid ku haboon oo ku saabsan dhadhanka weyn iyo faa'iidooyinka khudradda this, sababtoo ah waxaa ku jira marar badan oo badan oo waxtar badan oo ka badan ehelkiisa protein. Iyada oo la goosanayo wanaagsan, waxaan rabaa inaan sii wado ilaa inta macquul ah.
Sida loo diyaariyo aan tayo lahayn ee Kuuriya xilliga jiilaalka
Bikradda, dhadhanka yar yar ee dhadhanka ah ee aan tayo lahayn ee qaabka Kuuriyaanka ayaa si fiican u dhammeystiraya hilibka ama saxanka kalluunka, sidaas darteed dad aad u yar ayaa diidi doona in ay ku sii jiraan dukaanka salad this qallalan. Ka dib oo dhan, ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale faa'iido leh: inflorescences kiciya ku jira vitamiin iyo microelements badan, iyo isticmaalka joogtada ah ee tayo-qallaylku wuxuu ku kordhiyaa miisaanka lumay, hagaajinaysaa habka dheef-shiidka iyo shaqada wadnaha, iyo sidoo kale bixiyaa ka hortagga kansarka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gawsoorka 2020